HOOK IRAY INLINE
RANO LAZA NY FITIAVAN'NY hafa
HOOK RANO FRANTSAY
BOKY POINT FLAT
NY RANO FRANTSAY MITADY NY HAFA
Fitaovana valizy fanaraha-maso mikraoba mahazatra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-10-08
LocatorNy singa ao amin'ny actuator pneumatic dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny actuator rehefa ampiasaina. Izy io dia afaka manatsara ny fahamendrehan'ny valizy ary mampihena ny fiantraikan'ny herin'ny herin'ny tsiranoka sy ny hery tsy voalanjalanja an'ny mpanelanelana, mba hahazoana antoka ny fametrahana ny t ...
Ny fitsipiky ny fiasa sy ny fisafidianana ny refin'ny tsindry entona
Amin'ny famokarana indostrialy isan'andro, ny fandrefesana entona isan-karazany dia tena ilaina amin'ny fitaovana fandrefesana mahazatra. Misy karazany maro ny fandrefesana tsindry entona, ao anatin'izany ny karazana famantarana ny tondro sy ny karazana fampirantiana dizitaly. Izy ireo koa dia afaka manana fahaiza-mamindra lavitra mba hahafahan'ny angona faneriterena ...
Ahoana ny fomba hisafidianana mpandrindra tsindry gasification azo antoka sy avo lenta?
Ny tsindry gasification LNG mifehy ny skid dia mampifangaro ny fizotran'ny fanamafisana, ny fifehezana ny tsindry ary ny fofona. Raha ny fepetra takian'ny mpampiasa dia azo omena ny drafitry ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa isan-karazany. Ny teknolojia tafiditra amin'ny skid-integrated dia voarindra tsara, ny transportati ...
205 # Làlan'i GuangChang South, Distrikan'i Xi Hu, NanChang, Jiangxi Prov. Sina.